Lo bekungunyaka othokozisayo kubuchwepheshe obuku-inthanethi. Uma uyibuka kusuka ekubukeni kwezinyawo okungu-10,000, abantu basavutha umkhondo wokuthi bangayisebenzisa kanjani le ndlela entsha, i-Intanethi. Mhlawumbe kusobala kepha ngikholwa wukuthi unyaka ka-2008 ngunyaka okwenziwa ngawo izinhlelo namasu Micro.
I-imeyili idlule ekusetshenzisweni okujwayelekile kwe-eNewsletters futhi ithola umfutho emhlabeni wokuthengiselana. Esikhundleni sokunikeza 'umcimbi' wakho i-imeyili ethunyelwayo manje isuswe njengengxenye yecebo lokumaketha lilonke lokugcina abasebenzisi nokugcina bexhunywe esitolo sabo sokuthengisa, inethiwekhi yabo yokuxhumana nabantu, amabhulogi abawafundayo, njll.
Ama-Social Networks asuka kude namasu we-monolithic we Facebook, MySpace, LinkedIn futhi I-Plaxo… Bese uthuthela kumanethiwekhi omphakathi amancane we Ning (inothi: SmallerIndiana, AmaNavyVets, Ezokumaketha Ezemidlalo 2.0, I-IndyLance zimbalwa engiziqalile noma engibandakanyekile kuzo!).
Amasayithi okubekisa amabhukhimakhi afana ne- Digg ziyashiywa kumasayithi afana ne- I-Mixx - lapho ungasetha khona ama-Micro Groups ukujoyina. Ngingakhuthaza wonke umuntu ofunda ibhulogi yami ukuthi angithinte ukuze athole isimemo seQembu Lokumaketha Eliku-inthanethi ukuze sabelane ngezixhumanisi. Ezinye izinhlelo zokusebenza ezinjengeTruemors zizoqhubeka nokuvela ngamakhono wokukhomba acwengekile kunokukhetha imikhakha ekhethiwe kuqala.
Isoftware njengezicelo zezinsizakalo zizoqhubeka nokucindezelwa ukuthi ziguquguquke ngokwanele ukuze zifakwe uphawu futhi zihlanganiswe nezinye izinhlelo noma ezinye izinhlobo. Uhlelo lokusebenza 'olusemathinini' alusasebenzi ngokwanele ukuthi sikwazi ukuthenga nokubeka, kumele sisebenzise ubuchwepheshe beCSS ukuguqula izinhlelo zethu ziye kunoma iyiphi imvelo. Kumele sakhe izinhlelo zokusebenza ezikwazi ukuguqulwa ngemininingwane emincane kakhulu (emincane).
Lapho unakho, ukubikezela kwami ​​kwe-2008 - unyaka wecebo elincane kanye nesicelo sebhizinisi elincane. Amandla wokwakha like amaqembu, izinhlelo ezisebenza ngokwendawo, ama-SaaS anamagama amancane, noma amaqembu omphakathi alula azokhishwa ngokuphelele ngonyaka ka-2008. Labo abangazivumelanisi nezimo bazokhohlakala.